Tstar Composites-Carbon fiber uye fiberglass zvigadzirwa
Carbon Fibhi Tsvimbo
Washington City Offices Rod
tinogadzira marudzi ese ezvigadzirwa zveFRP
Carbon fiber uye fiberglass
Kuita kuti nyika ireruke uye yakasimba
Chero chimiro uye chitarisiko chinogona Customized
Carbon Fibhi Zvigadzirwa
Carbon fiber tsvimbo
Washington City Offices chubhu
Sei Sarudza Tstar
Nyanzvi muindasitiri yefrp kwepamusoro 20 makore
Isu tiri nyanzvi kabhoni faibha uye girazi faibha zvigadzirwa fekitori, Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira kabhoni faibha chubhu, kabhoni faibha tsvimbo, kabhoni faibha molding zvigadzirwa, fiberglass tsvimbo, fiberglass chubhu, fiberglass sheet, fiberglass profiles nezvimwe.
Zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa zvakanyanya mumakite, maseiri, maamburera, matende, mabhegi egorofu, fenzi masisitimu, matanda ekireshi, matransformer, zvibatiso zvematurusi, tsvimbo dzeantenna uye zvakavharirwa, njanji dzemanera, mabhurashi, matoyi, zvigadzirwa zvemhuka pamwe chete nematripod, mapango emireza. , ski pole, insulators, gratings, composite rock bolts, fiberglass/carbon rebars, nezvimwe.
5 mhando dzemaitiro ekugadzira
Simba rakanaka rekugera
Kusiyana kwechitarisiko (1k, 3k, UD nezvimwewo..)
Hapana mari yekuumba
Inogona kugadziriswa mumhando dzakasiyana ne cnc
Matani Gore negore Kubuda
Imwe nzira yakanaka yekutsiva bamboo kana huni, ine zvishanu zvakanakira:
1. Kuita kwakanakisa muUV kushorwa uye kushomeka kwemakemikari
2. Achararama mwaka wekukura wakawanda kupfuura matanda emushenjere nematanda
3. Yakareruka asi yakasimba, haimbofi yakaita ngura
4. Easy kuisa ne tapered end. Zviri nyore kutema kune chero hurefu hwaunoda
5. Kurarama kwenguva refu. Masiteki ekudzidzisa akanakisa, masiteki egadheni, masiteki ekireshi nemasiteki emunda wemizambiringa, masiteki ematomatisi
Mukohwi Wemuorivhi Anoshambadzira Carbon Fiber Rods
Inoshandiswa zvakanyanya mu-high-speed michina inoda kureruka uye simba guru
1. Simba guru (7-9 nguva dzesimbi)
2. Diki chikamu (1/4 yesimbi)
3. Yakanakisa thermal shock resistance
4. Kuderera kwekuwedzera kwemafuta ekuwedzera (small deformation)
5. Diki kupisa huwandu (simba rekuchengetedza)
6. Good kupisa kuramba (kunogona kushivirira tembiricha pamusoro 200 ℃)
7. Yakanakisa anti-corrosion uye nemwaranzi kuita
Carbon fiber sheet yekufambisa chikafu nekukurumidza drone
Fiberglass Stake ine rough jecha pendi
Fiberglass tende danda
Fiberglass Duct Rod For Wire Cable Kudhonza
Fiberglass Greenhouse Pole
2020 Yakanakisa Fiberglass Curtain Rod
Zvichangobuda Zvinyorwa Uye Nhau
Ndezvipi zvimiro zvekabhoni fiber composites zvikamu
Ndezvipi zvinhu zve carbon fiber composites zvikamu 1. Iyo chaiyo modulus uye elastic modulus yakakwirira. Kune akawanda marudzi e carbon fiber composite zvinhu. Anonyanya kuzivikanwa ndeye T300 uye T700. Simba rekusimba reT300 rinogona kusvika 3500MPa, uye density yezvinhu ndeye 1.6g/cm3 chete, Inogona kuonekwa nenzira iyi.
Kushandiswa kwe epoxy FR4 ndiro
Epoxy FR4 ndiro FR4 bhodhi tsananguro: inogadzirwa neyemagetsi giredhi girazi jira rakaiswa neyakagadziridzwa bismaleimide resin pendi, yakaomeswa uye inopisa yakadzvanywa. Executive standard: Q/TXXFR003-2010 Temperature resistance giredhi: H giredhi Muvara: natural color (dark brown) Hunhu: Iine yakakwirira mechanical uye dielectric properties, kupisa kupisa uye radiation resistance. Kupisa kwekushanda kwenguva refu ≥180℃.Kushandisa: Kwekushandisa kwemagetsi uye magetsi, zvakakodzera
Ndezvipi zvakanakira G10 epoxy board?
G10 epoxy board inowanzo shandiswa seanodzivirira zvimiro zvemumotor nemidziyo yemagetsi, senge mabreaker, switch makabati, transformers, DC motors, AC contactors, kuputika-zvisingapindi midziyo yemagetsi nezvimwe midziyo yemagetsi. Inoshandiswa zvakanyanya, nepo 3240 ibhodhi yekare yechinyakare. G10 ibhodhi rinowanzo shandiswa muEuropean neAmerica masisitimu. Nokuti raw material resin
Insulation performance ye insulating board pane tembiricha dzakasiyana
Insulating board inowanzoshandiswa insulating material. Nekuda kweiyo yakanaka insulating maitiro, yakashandiswa zvakanyanya mumaindasitiri mazhinji. Zvisinei, isu tichaona kuti kuvharidzirwa kwebhodhi redu rekudzivirira kuchakanganiswa nehutano hwezvinhu zvakasiyana-siyana, uye kuvhara kwebhodhi rekudzivirira kuchakanganiswawo nekupisa kwakasiyana. Chii chinonzi insulation
Shenzhen Headquarters Wedzera:
Yongfu chivakwa, baoan, shenzhen, Guangdong, PRChina
Dongguan Factory Wedzera:
Huizhou Factory Wedzera:
Tstar Composites© Kodzero dzese dzakachengetwa 2021
Kutenda nekutaura nesu! Tichava nekuonana newe munguva pfupi.
Mudiwa, Chii chandingakubatsira